January 1, 2019 - TV Annapurna
लोक सेवा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती
January 1, 2019 TV-Annapurna
सरकारले लोक सेवा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेर आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । यसप्रति लोक सेवाले असन्तुष्टि जनाएको छ र सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधेयक समितिले तयार पारेको विधेयकमा लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । जबकी लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ (२) मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसले गुठी सञ्चालनमा छोरीको हक दिलाए
January 1, 2019 January 2, 2019 Annapurna TV
काठमाडौँ, १७ पुस : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा २९औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आजै सर्वसम्मत नाम अनुमोदन भएका राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको उमेर हदका कारण आजदेखि कार्यकाल सकिँदैछ । पिता युवराजशम्शेर र माता उमा राज्यलक्ष्मीका सन्तानका रुपमा विसं २०१४ मङ्सिर २८ गते काठमाडौँको कालिकास्थानमा उहाँको जन्म भएको थियो । हाल उहाँ सुकेधारा काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक…
January 1, 2019 Annapurna TV
आज मध्याह्न यहाँ जीप दुर्घटना हँदा चालकको मृत्यु भएको छ । डोटीको बुडरका ३० वर्षीय कमल सुनारको मुत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक गिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । पुरचौडीबाट खोडपेतर्फ आउँदै गरेको से १ च १५७२ नम्बरको जीप भूमिराजमा दुर्घटना परेको हो । तुसारो परेकाले जीप सडकबाट चिप्लिएर करिब २० मिटर तल खसेको छ ।
हात मिलाएर मात्रै पार्टी एकता हुँदैन : नेता पौडेल
January 1, 2019 January 1, 2019 Annapurna TV
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई नेताले हात मिलाउँदैमा पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । काङ्ग्रेस बन्दीपुर गाउँपालिका–१ ले आज नाहालामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूले हात मिलाउँदैमा पार्टीमा एकता भएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शी मूल्याङ्कनले मात्रै पार्टीमा एकता हुनेमा जोड दिए । नेता पौडेलले विषयवस्तुमा आधारित भएर एकता चाहेको उल्लेख गर्दै विधानमा एकता गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “पार्टीमा क्यालेण्डरअनुसार काम गरौँ, त्यसमा एकता हुन्छ एजेण्डामा आधारित भएर काम गरौँ, त्यसमा…
हर्न निषेधित तथा प्लाष्टिक नियन्त्रण अभियान शुरु
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आजदेखि हर्न निषेधित तथा प्लाष्टिकमुक्त अभियान शुरु गरेको छ । बढ्दै गएको हर्न तथा प्लाष्टिकको प्रयोगले महानगर क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुका साथै नगरक्षेत्र कुरुप बन्न थालेपछि सोको नियन्त्रण गरी स्वच्छ नगर बनाउने लक्ष्य लिइएकोे छ । प्लाष्टिकको प्रयोगले आँखाको समस्या, दम, फोक्सोको क्यान्सर, थाइराइड र प्रजननसम्बन्धी हर्मोनको समस्या हुने गरेको छ । महानगरले आजदेखि ३० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक उत्पादन र प्लाष्टिकजन्य पदार्थको उपयोगमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने तथा प्रेसर हर्न बजाउन बन्देज लगाएको छ । नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले आफ्नो मौलिकता संरक्षण र विकासमा मात्र सामाजिक समृद्धि सम्भव भएकाले सो…
अनसन बस्न डा. केसी इलाममा
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी १६ औं अनसनका लागि इलाम पुगेका छन् । आफ्नो माग पूरा गर्न आजसम्मको अल्टिमेटम दिएका केसी सत्याग्रहको तयारीका लागि इलाम पुगेका उनका सहयोगी अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
गृहमन्त्रीलाई खुल्ला पत्रः कर्णाली कुन देश वा मुलुकमा पर्छ घोषणा गरियोस ?
श्रीमान गृहमन्त्री ज्यू, रातो सालाम । तपाइको नाममा एउटा खुल्ला पत्र लेख्न मन लाग्यो । तपाइकै सहयात्री कालिकोटका खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई फेरि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु भएछ । तपाइले पनि हिजो यसै गरी परिवर्तनको निम्ति भन्दै बिद्रोह गर्नु भएको होइन ? हो भने तपाई गृहमन्त्री हुने तपाइकै सहयात्री जो अहिले पनि जनताको मुक्तिका लागि संघर्षमा हुनुहुन्छ वहाँलाई किन हत्कडी लगाउनुहुन्छ ? भेरी कर्णालीका जनताले पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरणका बेला देखि हालसम्म परिवर्तनका लागि त्याग तपस्या गरेको कुरा अवगत नै छ । २००७ सालको आन्दोलन,२०३६ र २०४६ को जन आन्दोलनमा…
बैशाखमा नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने
नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका दुईजना नेपाली इञ्जिनियरको सहयोगमा राष्ट्रले पहिलोपटक आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको हो । ‘बड् थ्री’ नामक भू–उपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण गर्न सरकारले ती विद्यार्थीलाई रु दुई करोड उपलब्ध गराएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । सरकारले सहुलियत मूल्यमा तीनवटा भू–उपग्रह एकैसाथ निर्माण तथा प्रक्षेपणका लागि उक्त रकम पठाएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वैशाखसम्ममा प्रक्षेपणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सन १०१८ मा ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना
नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०१८ मा नेपाली प्रेस जगतका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको सञ्चार अनुगमन एकाईका अनुसार यो वर्ष ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको घटना भएका छन् । सन् २०१७ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७३ वटा घटनाहरु अभिलेख भएका थिए । तुलनात्मक रुपमा घटनामा कमी आएको भए पनि कानूनी रुपमा चुनौतीपूर्ण बनेको महासंघले जनाएको छ । यसै वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी केही प्रावधानले गर्दा नेपाली प्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको हो…
निर्मला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भन्छन्ः ‘केहीले अपराध कबुल गर्छन् तर डिएनए मिल्दैन, अचम्म छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा केहीले अपराध स्वीकार गरे पछि डिएनए नमिल्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने,केही मानिसहरु अपराध आफूले यसरी गरेको हो भनेर बयान दिन्छन्, तर डीएनए मिल्दैन, अपराधीले स्वीकार्छ, कवुल गर्छ, डीएनए मिल्दैन ।’ उनले बलात्कारपछिको हत्याको घटना आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । बलात्कारपछिका हत्याका अरु घटनामा दोषी पत्ता लागे पनि यसमा कठिन भएको बताएका हुन् । ‘प्रहरीले सुरुमा केही गल्तीहरु गरेको देखिन्छ । प्रहरीले त्यो गल्ती किन गर्‍यो भनेर प्रहरीकै एक पछि अर्को टिम, गुप्तचरहरुसमेत पठाएर अनुसन्धान भइरहेको…
राजनीतिLeaveacomment